“Wax Yar Oo La Maarayn Karaa Madhiyay Ii-door ” Aqoonyahan Cabdiraxmaan Yuusuf Cali | Hayaan News
“Wax Yar Oo La Maarayn Karaa Madhiyay Ii-door ” Aqoonyahan Cabdiraxmaan Yuusuf Cali
Mar waxaa guul ahayd in dhagaha shacabku maqlaan Nabad iyo Isfahan ka dhex abuurmay dhinacyada is horfadhiyay ee xukuumada iyo Jabhada, Marna waxaa guul dara ahayd maxsuulka kasoo baxay madasha iyo guusha Ninkii lahaa uu afkiisa ku daboolay.
Waa fursad uu mar labaad lunshay Madaxweynahu.
Markii koobaad waa markii haldoorku soo afmeeray colaadii ceel afwayn ,ee ay codsadeen in ay raaciyaan sarkaalka cadhooday hawshiisa, Madaxweynahu maalintaa waxuu isticmaalay ixtiraamida habraaca dhaqanka ciidanimo, waxaanu codsaday in arinkaa loo daayo ciidanka oo faraha lagala baxo maadama ay tahay Arrin ciidan.
taladaasi waxay sababtay dhimasho, dhaawac, iyo burbur dhaqaale walina waxaa fidsan colaadii ay abuurtay.
Fursada Nabada maanta waxaa guusheeda hantiyi lahaa madaxweynaha marka la eego danta qaranka, taariikhda danbe iyo maamuuskaba.
Waxuu noqon lahaa Nin Nabadiina ku guulaystay colaadiina ku guulaystay (winner peace and war) .
Hadase Nabadiina waa lumiyay colaadiina waa Xaashi banaan oo hadii Jabhada caare kasbato taageero shacab oo deegaan kaasa waxaa dawladu lumin doontaa fursadaha guusha badi.
Madaxweynahu waxaa uu lumiyay warqad uu kula dagaalamayay Garabka odayaasha ah ee ugu tilmaana xagjirka.
Sida cad odayaasha Beeshaasi waa laba kooxood 1. Koox madaxweynaha loo tuhmayay 2. Koox xag jir ugu tilmaana.
Hadaba Madaxweynahu goaankiisa kuma uu salayn sidii uu u xejisan lahaa Garabka odayaasha ah ee la talada ahaa, waxaana meesha ka muuqatay in odayadu gogashana ku afmeereen hadal gobeed, shacabkoodiina u tilmaameen in aan meesha caqli lagu kala baxaa oolin.
Sidaa awgeed MD. Muuse waxuu mideeyay siyaasiyan odayadii, waxaana suuragal ah in taageerada Jabhadu kobocdo.
Hadii aan odayaashu tabashada jirta iyo sidii qaranka loo wada yeelan lahaa doodu ahayn, Kuna soo ururtay cafis waxaa MD muuse lumiyay fursad dahabiya iyo guul siyaasadeed .
Hadaba waxaa suaal u baahan Jabhada iyo Taagerayashu ma waxaa ay Naf iyo moodba u gubayaan cafiska Hogaamiye Caare oo qorshe siyaadadeed ma jiro.
Dhamaan shacabka Nabad ,cadaalad iyo sinaan ayaa deeqda, waxaa loo baahan yahay qorsho nololeed iyo siyaasad furfuran oo u adeegta shacabka dhamaan.
Aan wada ilaashano Nabada, abuurnana Nolol sharaf leh.
Aqoonyahan Cabdiraxmaan Yuusuf Cali
Qalinkii Cabdiraxmaan Yuusuf Cali